Viber fanavaozana amin'ny alàlan'ny fanampiana hafatra eo noho eo | Vaovao IPhone
Eo amin'ny tontolon'ny rindranasan-kafatra hafatra dia tsy WhatsApp sy Telegram ny zava-drehetra. Eo an-tsena isika izao dia afaka mahita rindranasa tena mitombina hafa izay ara-dalàna izy ireo dia manatanteraka ireo fiasa mitovy amin'ireo lehibe roa nolazaiko tetsy ambony. Line, WeChat na Viber dia rindrambaiko fandefasan-kafatra izay matetika ampiasaina amin'ny faritra sasany amin'ny planeta ary manana fotoana sarotra manitatra amin'ny hafa. Viber, ohatra, dia mety ho tsy dia fantatra loatra na dia iray amin'ireo tranainy indrindra amin'ny tsena aza, dia be mpampiasa any amin'ny firenena Arabo, izay mbola tsy nahavita nanjana ireo faritany ireo ny WhatsApp na ny Telegram.
Amin'izao fotoana izao ny Viber dia manana mpampiasa maherin'ny 750 tapitrisa manerantany. Ity sehatra fandefasan-kafatra ity dia nanitatra tsikelikely ny asany ary mamela antsika hanao antso an-tariby amin'ny laharana finday na laharana finday, manao antso an-tsary amin'ny kalitao HD, mizara rakitra amin'ny endrika GIF, misy sticker ihany koa (na dia karama aza ny ankamaroany)… nohavaozina ny fampiharana azy amin'ny fanampiana endri-javatra vaovao izay efa ela no hita ao amin'ny Skype, toy ny mety handefasana hafatra horonan-tsary hatramin'ny 30 segondra mankany amin'ireo mpifanerasera aminay, ny mety hanonona resaka amin'ny chat amin'ny alàlan'ny famantarana eo am-pitadiavana votoaty ...
Ity fanavaozana vaovao ity dia manolotra antsika ihany koa ny fanavaozana ny rindranasa mampiseho ny sasany ny emotika izay efa nanatrika facelift, ho fanampin'ny fanolorana antsika habe somary lehibe kokoa noho ilay tamin'ny kinova teo aloha. Ho fanampin'izay, nanararaotra nanitatra ny isan'ny olona afaka mandray anjara amin'ny chat group koa ry zareo. mampiakatra olona hatramin'ny 250.
Inona no vaovao amin'ny Viber kinova 6.5.5
Hafatra horonantsary eo noho eo: tsindrio lava ny kisary horonantsary eo noho eo, mba hakanao ny fotoana misy horonan-tsary 30 segondra, famoahana halefa
Fanitarana chat - Mitadiava sy zarao ny atiny an-tserasera, avy hatrany amin'ny efijery fifampiresahanao. Safidio ny kisary "@", tadiavo ny atiny ary zarao mivantana avy amin'ny valiny, amin'ny tsindry iray monja. (Topi-maso ny atiny amin'ny 3D Touch, tsy misy afa-tsy amin'ny iPhone 6s sy ny dikan-teny manaraka)
Emoticons nohavaozina - Ny endrikay vaovao dia manana endrika vaovao!
Resadresaka vondrona lehibe kokoa: azonao atao izao ny manampy olona 250 ho an'ny fifampiresahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Viber fanavaozana amin'ny alàlan'ny fanampiana hafatra eo noho eo
Manomboka mivarotra Apple Watch nohavaozina i Apple